Sugamo Station, Tokyo (27th Nov)
English • Nov 30, 2021
ミャンマーの国民には 我々国民しかいな ✊🏻
11月27日、我々TTAJチームは、東京の巣鴨駅でチラシやポケットティッシュなどを配る周知活動を行いました。 今週は"We support "チームのご協力をいただいて募金活動を行いました。
People have no one but people themselves! ✊🏻
27th of November, TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Sugamo Station, Tokyo.
"We support " team collaborated with us this week activity for fund raising in order to support CDMers and other areas needed for help in Myanmar.
We were able to hand out over 300 pamphlets and 300 pocket tissues from 11:00am till 2:00 pm.
"ပြည်သူတွေမှာ ပြည်သူပဲ ရှိတယ်" ✊🏻
ယမန်နေ့ ၁၁ လပိုင်း ၂၇ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို Tokyo/Sugamo ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ယခုတစ်ပတ် TTAJ အဖွဲ့၏ လှုပ်ရှားမှုတွင် We Support အဖွဲ့နှင့်အတူတူ Revolution Tokyo Myanmar - R.T.M မှ မောင်နှမများလည်း လာရောက်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး ဒီပဲယင်း စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် လိုအပ်တဲ့နေရာများတွင် အသုံးပြုနိုင်ရန် အလှူငွေကောက်ခံခြင်းလှုပ်ရှားမှုကို ပူးတွဲလုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။
နေ့လည် ၁၁ နာရီမှ ၂ နာရီ အတွင်း
လက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၃၀၀ ကျော်၊ တစ်ရှူး အခုရေ ၃၀၀ ကျော်ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။